Ugbo ala ohuru maka ulo mkpofu "ihe ojoo" | Njem zuru oke
Naanị ụnyaahụ na Onye nnọchite anya gburugburu ebe obibi na nkwado nke Jerez City Council, Africa Becerra, gosiputara ndi mmadu ihe ohuru ugbo maka ihe efu ewere ihe ojoo a na-emepụta ya na adreesị ọ bụla. Vehiclesgbọ ndị a nwere ọrụ nke ịnakọta ihe mkpofu nile nke ndị Jerez kewapụrụ na mkpofu n'onwe ya, na ha ga-atụba ya n'ime ihe ndị a raara nye ya mana nke ahụ nwere ike ịbụ na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke ụlọ ha.
Iji kwado mkpofu ihe mkpofu a, a ga-etinye ụgbọ ala na-agagharị agagharị site n'oge ruo n'oge n'ebe dị n'obodo anyị. Kpọmkwem, ha ga-amalite ọrụ ha na Onodu Roundabout, n'ihi na ndị niile bi n'ógbè ahụ San Joaquín, na n'ime Moreno Okporo ụzọ Mendoza maka ndị bi na San Telmo.
Site na ọnọdụ abụọ mbụ ndị a, na n'ime afọ ahụ, ụgbọ ala ahụ ga-aga ebe dị iche iche na agbata obi n'obodo anyị iji kpokọta mkpofu dị iche iche dị ka ihe egwu. Ugbu a, Ndị Ọrụ Gburugburu Ọ na-akwadebe usoro broshuọ ebe a ga-agwa ya ụbọchị na ebe ndị nke a ga-agagharị agagharị.
Ihe mkpofu nke a na-ahụta dị ka ihe dị egwu na nke ndị ụgbọ ala ndị a ga-anakọta aerosol, ekwentị mkpanaaka, akpụkpọ ụkwụ, ọgwụ, fluorescents, arịa na foduru nke agba, varnishes, lacquers, mmanụ mmanụ, X-ụzarị, obere ngwa, toner na ígwè obibi akwụkwọ, ihe mkpofu kọmputa, uwe na akwa, iko dị larịị na obere irighiri ihe , batrị na batrị. Nke ahụ bụ, ihe niile nwere ike megharịa ma ọ bụ nke nwere ike imebi gburugburu ebe obibi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Vehiclesgbọala ọhụrụ maka ụlọ mkpofu "ihe egwu"
imegharị ihe dị mma
José Mercé, Jerez nke nje dị ọcha